Global Voices teny Malagasy » Raha Porofo ny Fanehoan-Kevitra an-tSerasera, Dia Manana Olana Fankahalana Afrikana i Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Jona 2015 5:12 GMT 1	 · Mpanoratra Ayo Awokoya Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Mediam-bahoaka
Ary tsy ao Etazonia ihany izany. Namoaka fanehoan-kevitra manavakavaka tsy tambo isaina  tamin'ny taranaka Afrikanina ihany koa ireo Shinoa mpiserasera rehefa maneho hevitra momba ny zava-nitranga.
Nanasongadina  tao anatin'ny antsafa niarahana tamina gazetiboky iray i Gordon Mathews vao haingana, izay manampahaizana manokana momba ny Afrikana ampielezana ao Shina, fa nihamaro ireo Afrikanina nanambady any Shina. Hitany tamin'ny fikarohana nataony fa iray ampahafolon'ny ny Afrikanina dia nanana vady na sipa shinoa ary amin'ny ankapobeny dia miteraka ny metisy Afrikana-Shinoa 200 isan-taona ao Guangzhou.
Ny iray amin'ny sakana hiempoan'ny Afrikana any Shina ny fanaraha-maso hentitra ireo vahiny hafa firenena, izay mametraka ankolaka ihany koa ny fielezan'ny fijery an-tendrony ara-bolonkoditra. Tamin'ny Septambra 2013, nanomboka nanankery ny fitsipika ho an'ny vahiny momba ny visa vaovao sy ny fahazoan-dalana honina , izay nanasarotra kokoa noho ny taloha ny fiasana na fanaovana fandraharahana ao Shina hoan'ny olona tsy manana orinasa na andrim-panjakana mahampikambana azy. Raha vao manitatra ny fotoana ijanonany tsy manana visa manankery izy ireo dia mety iharan'ny fandoavana onitra 500 yuan (eo ho eo amin'ny 80 dolara amerikana) isan'andro. Araka ny tatitry ny fampitam-baovao  voatsonga tamin'ny volana Aogositra 2014, dia 30.000 ihany ny fahazoan-dalana honina nomen'ny manampahefana ao Guangzhou hoan'ny Afrikanina, raha nisy manodidina ny 300.000 ireo Afrikana tsy manan-taratasy monina ao an-tanàna, ary ny maro amin'izy ireo dia ao amin'ny raharaham-barotra.
Momba an'i Guangzhou, 90 isan-jaton'ny Afrikana no tsy manan-taratasy satria tsy nahazo visa. Matetika  voatazona am-ponja izy ireoka izany no mahatonga ny Afrikana heverin'ny Shinoa ho tafiditra manao asan-jiolahy.
Ireo fihetsikamivoaka an-tserasera sy amin'ny alalan'ny media sosialy no naminavinana ny halalin'ny fankahalana vahiny eo anivon'ny olom-pirenena Shinoa manoloana ireo Afrikana ao Shina. Ankoatra ny rotaka tao Baltimore any Etazonia, dia tranga iray hafa nahatonga tenim-panavakavahana an-tserasera ny nisamborana ka dia ny fanehoan-kevitra amin'ny aterineto manoloana ny fisamborana andian-jiolahy “vahiny” antsoina hoe “mpiadin'ny fahafahana”  tamin'ny volana Aprily. NIhazakazaka nifantoka tany amin'ny volonkoditry ny mpikambana tao amin'ny andian-jiolahy ny fanehoan-kevitry ny mpiserasera :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/06/23/70997/
 Namoaka fanehoan-kevitra manavakavaka tsy tambo isaina: http://www.chinafile.com/library/china-africa-project/chinese-racist-views-towards-blacks-and-africans
 nanomboka nanankery ny fitsipika ho an'ny vahiny momba ny visa vaovao sy ny fahazoan-dalana honina: http://www.scmp.com/news/china/article/1272959/under-chinas-new-immigration-law-harsher-fines-illegal-foreigners
 tatitry ny fampitam-baovao: http://news.sina.com.cn/c/2014-08-15/080530689251.shtml
 andian-jiolahy “vahiny” antsoina hoe “mpiadin'ny fahafahana”: http://news.ifeng.com/a/20150428/43654104_0.shtml